Qaraxii xalay oo noqday kii ugu Xooga weynaa ee ka dhaca Muqdisho iyo gaariga loo adeegsaday oo ahaa .. - iftineducation.com
iftineducation.com – Wasiirka Amniga Gudaha Xukuumada C/risaaq Cumar Maxamed, oo Warbaahinta kula hadlay Htelka SYL oo xalay la weeraray ayaa sheegay in qaraxii xalay ka dhacay agagaarka Hotelka uu ahaa kii ugu weynaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho.
Waxa uu xusay Wasiirka Amniga qaraxii xalay in loo adeegsaday gaari kuwa xamuulka qaada ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, kaa uu tilmaamay in Ciidamada ay ku celiyeen bar koontarool oo ku dhaw dhismaha Hotelka SYL halkaasna uu gaariga uu uu ku qarxay.
Wasiirka ayaa sheegay in qaraxii xalay uu ahaa mid ka xoog badnaa qaraxii sanadkii hore lagu weeraray dhismaha Hotelka Jaziira ee magaalada Muqdisho, waxa uuna tilmaamay in baarisla horudhac ay sameeyeen booliiska iyo Hay’ado tagaeera lagu ogaaday in qaraxii xalay culeeskii ahaa 200KG .
Qaraxii xalay oo ahaa mid aad u xooganaa si weyna looga maqlay guud ahaa magaalada Muqdisho ayuu sheegay Wasiirka amniga gudaha in uu samaeyntiisu uu aad u yaraa , uuna ilaah ka bad baadiyay dad badan oo ka agdhawaa halka uu qaraxaasi ka dhacay.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in Ciidamada amniga ay toogteen rag uu sheegay in ay damacsanayaeen in ay gudaha u galaan Dhismaha Hotelka SYL, waxa uuna bogaadiyay Wasiirka Ciidamada amaanka uu sheegay in ay yihiin geesiyaal naftooda u huray difaaca dadkooda.
Ururka Dhakhaatiirta Indhaha Soomaaliyeed oo Muqdisho lagu yagleelay Hogaana doortay (Daawo Sawirada)